Inona no akora ampiasaina amin'ny gorodona? - ZD manam-pahaizana zoro
Home > Inona no akora ampiasaina amin'ny gorodona?
Voalohany, gorodona hazo matevina
Tsy ilaina ny milaza fa ny gorodona vita amin'ny hazo mateza dia matetika efa mahazatra ao an-trano, saingy maro ny olona no kivy noho ny vidiny lafo. Izy io dia miaro ny tontolo iainana ary alaina mivantana avy amin'ny natiora, tsy misy taratra, formaldehyde ary ireo olana hafa. Faharoa, mafana ny ririnina ary mangatsiatsiaka amin'ny fahavaratra, matevina, mitafy akanjo ary manana fiainana lava.Tsy manamaivana izany, mety hampihena ny vidin'ny fanoloana amin'ny vanim-potoana ho avy.
Ny vokarin'ny maso koa dia tena tsara, manome fahatsarana kanto sy mihaja, saingy tsy manary ny fahatsapany.
Na hazo fisaka vita amin'ny hazo lamina na gorodona voalamina, misy zavatra iray itovizany, izany hoe, misy entona manimba toy ny formaldehyde, satria ny gorodona «composite» dia mila mifangaro amin'ny lakaoly, ary ny lakaoly dia misy singa simika maro, izay mandoto be ny tontolo iainana. Ny vokatra toy izany ao amin'ny efitrano fatoriany dia hisy fiantraikany amin'ny fahasalamanao.
Fahatelo, gorodona vita amin'ny volotsangana
Ny gorodona vita amin'ny volotsangana sy hazo dia nanjary malaza tsikelikely koa tato anatin'ny taona vitsivitsy.Ilay tombony azo amin'ny fiarovana ny tontolo iainana, fahasalamana, fahatsapana voajanahary, fanoherana ny hamandoana ary fanoherana ny angady.
Fahaefatra, gorodona maitso
Ny gorodona milina dia tsy azo itokisana. Amin'ny ankapobeny, ny avo kokoa ny hateviny, ny tsara kokoa ny kalitao!
Inona no akora ampiasaina amin'ny gorodona? Ny atiny mifandraika